C/Salaan Top oo Iska Casilay Guddiga Fulinta SPDP - Xogtashacabka.com
Search...	Home About us Contact us C/Salaan Top oo Iska Casilay Guddiga Fulinta SPDP
Published on Sunday, 04 August 2013 03:37	Xogta Shacabka (Jigjiga) Wararka Jigjiga ka imanaya waxay sheegayaan in shalay kulankii Guddiga Fulinta xisbiga SPDP dib uga furmay xarunta xisbiga ee magaalada Jigjiga, halkaasi oo ay qiimayn uga bilaabatay xubnaha guddiga fulinta, inkastoo aanay soo wada xaadiriin dhamaantood, sida ay noo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonyahay.
C/salaan Axmad (C/Salan Top) oo ah La-taliyaha Madaxweynaha ee Arrimaha Horumarka ayaa la xaqiijinayaa inuu istiqaalo ka dhiibtay xubinimadii guddiga fulinta iyo golaha dhexe ee SPDP. Nin ay aad isugu dhawyihiin Cabdisalaan ayaa oo sheegay in C/salaan isu casilay kadib markii dagaal aanu filaynin uu kala kulmay fikir uu ka dhiibtay shirkii guddiga fulinta ee todobaadkii hore.
C/Salaan oo lagu yaqaano cad-cadaan iyo inuusan la gabanin fikirkiisa, ayaa sheegay inuusan kasii mid noqon karin guddiga fulinta xisbiga maadaama an la ogolayn fikir ka duwan ka hogaamintu ay qabaan, xubinkii soo jeediya fikir ka duwana la isugu tagayo oo hal mar budhka la wada saarayo.
Shirka golaha dhexe ee maanta ayaa la filayaa in laga ansixin doono xil ka qaadista C/salaan Axmad oo horay u soo ahaa Duqa Magaalada Jigjiga iyo Maareeyaha Maamulka Magaalada Diridhabe.
Ma jiraan xubno kale oo shirka lagu eryay sida ay noo xaqiijiyeen ilo kala duwan oonu la xidhiidhnay.